၂၀၁၃ ကျောင်းသားငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်ကို ဦးမင်းကိုနိုင် ဂုဏ်ပြုမိန့်ခွန်းပြော | ဧရာဝတီ
၂၀၁၃ ကျောင်းသားငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်ကို ဦးမင်းကိုနိုင် ဂုဏ်ပြုမိန့်ခွန်းပြော
ကိုညို (အော်စလို)| February 16, 2013 | Hits:17,677
| | မီးဒုတ်တွေကိုင်စွဲပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက် ချီတက်ကြ (ဓာတ်ပုံ – ISFiT Facebook)
နော်ဝေးနိုင်ငံ ထရွန်ဟန်းမြို့(Trondherm) ၌ ကျင်းပနေသည့် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားပွဲတော်တွင် ယခုနှစ် ကျောင်းသားငြိမ်းချမ်းရေးဆု ချီးမြှင့်ခံရသည့် အကျဉ်းစံ အီရန် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်နှင့် ဖြစ်ရပ်တူညီခဲ့သူ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးမင်းကိုနိုင်က အထူးမိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“အခု ၂၀၁၃ခုနှစ်အတွက် ကျောင်းသားငြိမ်းချမ်းရေးဆု ရတဲ့ အီရန်က ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မာဂျစ် တာဗာ ကိုလီ (Majit Tavakoli) ဟာ အီရန်မှာ အကျဉ်းကျနေတာ ၄ နှစ်လောက်ရှိပြီ။၊ ကျနော်လည်း ထောင်သက် ၁၃ နှစ် အကြာမှာ အဲဒီဆုကို ရခဲ့တာကြောင့် ကိုယ့်အတွေ့အကြုံနဲ့ယှဉ်ပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်” ဟု ကိုမင်းကိုနိုင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောကြားသည်။
ကျောင်းသားငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် သူမတူအောင် ဆောင်ရွက်သော ကမ္ဘာတလွှားရှိ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ သို့မဟုတ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကို နော်ဝေကျောင်းသားထု ကိုယ်စား ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ပြီး ၂ နှစ် တကြိမ် ကျင်းပနေကြ ထရွန်ဟန်း နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားပွဲတော်တွင် ဆုပေးအပ်သည်။
ဦးမင်းကိုနိုင်ကိုလည်း ၂၀၀၁ ခုနှစ်က ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က အကျဉ်းကျနေ၍ ကိုယ်တိုင် မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့သောကြောင့် ပြည်ပရောက် ကျောင်းသားများက လက်ခံယူခဲ့ရသည်။
“ဒီဆုဟာ ရုပ်ဝတ္တုအားဖြစ်တော့ မရေတွက်လောက်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အနှစ်သာရအားဖြစ်တော့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ရှိနေပြီး လဲပြိုလုလုဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် ထူတဲ့လက်၊ကမ်းတဲ့လက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီဆုဟာလည်း မာဂျစ်အတွက် မတ်မတ်ရပ်ဖို့ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အကျဉ်းထောင် အမှောင်ထုထဲက ဓူဝံကြယ်လို ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားတွေက အကျဉ်းကျ ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လည်း ဖြစ်တယ်။ အတူချီတက်ရမယ့်လမ်းမှာ သံပြိုင်ဆိုရမယ့် သီချင်းလည်း ဖြစ်တယ်” ဟု အထူးမိန့်ခွန်းတွင် အီရန်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကို ရည်ညွှန်းကာ မိမိအတွေ့အကြုံနှင့် ယှဉ်၍ ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဦးမင်းကိုနိုင်က ဧရာဝတီကို ပြောပြသည်။
အီရန်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မာဂျစ်သည် အီရန် ပြည်သူများ၏ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ကျောင်းသားထုအတွင်း လှုံ့ဆော်စည်းရုံးမှုကြောင့် အီရန် အာဏာပိုင်များက ထောင်သွင်း အကျဉ်းချထားခဲ့သည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၁၁၆ နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ် ၄၅၀ အပါအ၀င် ထရွန်ဟန်းမြို့မှ ကျောင်းသား ၄၅၀ ကျော် စုစုပေါင်းကျောင်းသား ၉၀၀ ကျော် တက်ရောက်နေသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားညီလာခံ၌ နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဟောပြောဆွေးနွေးမှုများပါ ပြုလုပ်နေရာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဦးမင်းကိုနိုင်နှင့် ဦးပြုံးချိုတို့လည်း တက်ရောက်နေသည်။
“ကျနော်တို့ နိုင်ငံနဲ့ ဝေးကွာတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာ နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နေကြတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ မေးခွန်းတွေနဲ့ ရှိနေတုန်းပဲ”ဟု ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ မှ ခေါင်းဆောင်တဦးလည်း ဖြစ်သည့် ဦးပြုံးချိုက ဆိုသည်။” နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြဿနာ ချည်းကပ် အဖြေရှာပုံတွေကလည်း အတွေ့အကြုံတခု ပါပဲ” ဟုလည်း ပြောသည်။
သောကြာနေ့က ကျင်းပသည့် ထရွန်ဟန်း ကျောင်းသားပွဲတော် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများအတွင်း နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ခေတ်မှီနည်းပညာများ အသုံးပြု၍ သတင်းနှင့် အချက်အလက်များ ဖလှယ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ကွန်ယက်များ ဆက်သွယ်ဖွဲ့စည်း၍ နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေုး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အကောင်အထည် ဖော်ရန် ဆွေးနွေးကြကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုတွင် လက်တွဲပါဝင်ပြီး အာဏာရှင်တိုင်းပြည်များ၏ အပြောင်းအလဲအတွက် နိုင်ငံတကာကျောင်းသား အဖွဲ့အစည်းများက တက်ကြွစွာ ရှိနေသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရ၍ အလွန် အားတက်မိကြောင်းလည်း ဦးမင်းကိုနိုင်က ပြောသည်။
“အခမ်းအနားအပြီး ညနေပိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးမီးဒုတ်တွေကိုင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက် ချီတက်ပွဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရုရှားနိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေလည်း ပါဝင်တာ မြင်ရတော့ ကျနော် အင်မတန် အားရတယ်။ တချိန်ချိန် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကြွင်းကျန်နေတဲ့ အာဏာရှင် တိုင်းပြည်တိုင်းကို ဆန့်ကျင် အာခံ ပြောင်းလဲပေးမယ့် ကျောင်းသားထုတွေ အသင့်ရှိနေပြီဆိုတာ ကျနော်တွေ့ရတယ်” ဟု ဦးမင်းကိုနိုင်က ဆိုသည်။
ယခု နော်ဝေခရီးစဉ်သည် ၂၀၁၂ ခု နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်လာသော ဦးမင်းကိုနိုင်နှင့် ဦးပြုံးချိုတို့အတွက် ပထမဆုံး ဥရောပ ခရီးစဉ်လည်း ဖြစ်သည်။
“နော်ဝေးနိုင်ငံဟာ တကယ့်ကိုငြိမ်းချမ်းပြီး နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်သလို ချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဟာ အေးချမ်းမှု ကြွယ်ဝမှုတွေထဲမှာ နစ်မြောမနေပဲ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အခြားတဖက်က ပူလောင်မှောင်မဲတွေအောက်က သူတွေအတွက်ပါ ကြောင့်ကြစိုးရိမ်တတ်ကြတယ်” ဟု ဦးမင်းကိုနိုင်က နော်ဝေးနိုင်ငံအပေါ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
္ခအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားပွဲတော်ကို ၁၉၉၀မှစတင်ပြီး၂နှစ် တကြိမ် နော်ဝေးနိုင်ငံ ထရွန်ဟန်းမြို့၌ ပုံမှန် ကျင်းပလေ့ရှိသည်။
သောင်္ကြာနေ့တွင် ရောက်ရှိလာသော ဦးမင်းကိုနိုင်နှင့် ဦးပြုံးချိုတို့သည် နော်ဝေးနိုင်ငံတွင် ၄ရက်ကြာ နေထိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အော်စလိုသို့ သွားရောက် လည်ပတ်၍ မြန်မာများနှင့် တွေ့ဆုံမည့်အပြင် အော်စလို တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသားများနှင့် တွေဆုံဟောပြောပွဲလည်း ပြုလုပ်မည်ဟု သိရသည်။
ရန်ကုန် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ အပြီးသတ် သဘောတူညီချက်တွေ ရနိုင်မလားမြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍ ပါဝင်ခွင့်ရရေး လုပ်ဆောင်မည်ဟု ဆိုအခွန်လွတ် နော်ဝေ ဟောလီးဒေးနှင့် ဆက်ကြေးကောက် မြန်မာပြည်KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ကာချုပ်တို့နှင့် တွေ့ဆုံဦးအောင်မင်းနှင့် KIA တွေ့ဆုံပွဲ စစ်တပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ မတက်
5 Responses LeaveaReply Cancel reply
theingi tun February 16, 2013 - 4:35 pm ဂုဏ်ယူပါတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်။မြန်မာကျောင်းသားထုတစ်ရပ်လုံးကိုယ်စားဒီဆုကိုရယူပေးတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။၈၈အရေးအခင်းမှာကြွေလွင့်သွားသောပန်းကလေးများကိုယ်စားရယူတယ်လို့လဲမှတ်ပိုက်ပါတယ်။
Reply မြန်မာပြည်သား February 16, 2013 - 6:01 pm congratulation Ko Min Ko Naing
Reply Sunshine February 18, 2013 - 2:11 pm Min Ko Naing for President is the right idea. Without the help from cronies, he can serve us well. He is the real deal. We love himalot.
Reply lily February 18, 2013 - 6:09 pm I’m proud of you , Ko Min Ko Naing.
Reply Thida Moe February 23, 2013 - 7:13 pm I am Proud of You for Myanmar .